:Bọchị: Nọvemba 13, 2019
a mbụ na Turkey ..! Oge Smart Taxi Amalite na Ankara; Onye isi obodo Ankara bụ Mansur Yavaş, onye kwere nkwa ntuli aka ọzọ, webatara ndị nta akụkọ izizi nke “Smart Taxi Project ına. The mbụ ngwa Turkey [More ...]
TSgbọ njem TTSD Co. Gaa leta onye isi njikwa; Ndị otu Kọmitii Etiti nke United States (BTS) na ndị isi Alaka na TCDD Taşımacılık A.Ş. Onye isi njikwa Kamuran Yazıcı gara leta ya. Interview; [More ...]
Union of Municipality of Marmara na Kocaeli Mayor Assoc. Dr. Tahir Büyükakın, letara ndị ahịa nọ n’etiti Izmit Kurucesme chọrọ ọrụ ịmụ nwa, hasbihal na ụmụ amaala. Mụta atụmanya nke ụmụ amaala si n’obodo ukwu na [More ...]
Malatya Little na-amụta okporo ụzọ; Malatya Metropolitan Municipality Ngalaba Omenala na Ọha na Ọha na Ọha na Mmekuta nke indmụ akwụkwọ Obiọma gara Ọdụ Mmụba Okporo ụzọ Trafik. Gaa na Ọzụzụ Ahịa Na-ahụ Maka Obodo Na-ahụ Maka Obodo na Yeşiltepe [More ...]
Asambodo Asambodo Ugbo ala na Türk Loydu; Türk Loydu nyocha izu ọrụ nke ụgbọ ala ụgbọ oloko ka esonyere na nzere nke TS EN ISO / IEC 17065 nke TÜRKAK kwuru. Nkwupụta Türk Loydu'nun kwuru [More ...]
Onyinye International nye Istanbul Metro; Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro wuru site na Istanbul Obodo Asọmpi Avenue, nke otu asọmpi ụlọ ọrụ kacha mkpa n'ụwa. Ememe onyinye [More ...]
Onye Minista gburugburu na atụmatụ ime obodo Mehmet Kurum, kwuru nkwupụta dị mkpa gbasara ọwa Channel Istanbul! Ọrụ nzuzu ahụ na thelọ Ome Iwu na Mmefu Iwu Mmefu. [More ...]
Onodu maka Kaadị njem njem efu na nke nwepuchara ego maka ndị okenye nọ na Bursa; N'obodo Bursa n’enweghi nkwekọrịta na ego ebughi oke njem usoro iwu 5. ndi otu ndi otu ndi nile ndi agha ezumike nka [More ...]
Gọvanọ Ayhan gara Sivas Ankara High Train Station Train; Gọvanọ Sivas Salih iji nyochaa ọrụ na-aga n'ihu na nke a na-eme atụmatụ na Sivas na iji nye ndị ọrụ ọha n'ụzọ kachasị mma maka abamuru nke ụmụ amaala. [More ...]
2019 İZBAN Oge Maka Oge Gịnị bụ İZBAN Oge Emeghe? Kedu oge ọ na-emechi?
2019 İZBAN Oge njem, Gịnị bụ İZBAN imepere? Kedu oge ọ na-emechi ?; İZBAN bụ otu n'ime usoro ọdụ ụgbọ njem obodo kacha ibu na Turkey nwere njikọ ọdụ ụgbọ elu. [More ...]
Nkwado sitere na TUVASAS gaa Sapling Mgbasa Mgbasa; TÜVASAŞ akwadowo ọtụtụ narị saplings site n'aka Ministri Ọrụ Ugbo na Oke ohia site na njigide Ol Breathe maka Ọdịnihu ". [More ...]
A ga-azụta batrị 49 E1 dabara adaba maka ụgbọ okporo ígwè 20 R 300 1 / 9 Slope Monoblock Manganese Core Kwadebe Railway II na Railway III Ferries Njikere ịrụ Ọrụ PC [More ...]